राजमार्ग खुलाउन कम्तीमा एक साता
जनकपुर, ३१ साउन । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको धनुषास्थित रातु पुल भासिएर अवरुद्ध भएको यातायात खुलाउन भरपर्दो पहलका लागि स्थानीय राजनीतिक दल तथा समाजिक संघसंस्थाहरुले माग गरेका छन्। शुक्रबार बर्दिबासमा बैठक गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरु...
५३ जनाको मृत्यु, सयौं बेपत्ता
काठमाडौं, ३१ साउन । केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी र पहिरोमा परी ५३ जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि बिहीबार १२ जनाको मृत्यु भएको थियो। देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षासँगै बाढी...
एमालेमा विवाद पदाधिकारीले टुंग्याउने
काठमाडौं, ३१ साउन । एमालेमा पोलिटब्यूरो चयनको प्रावधानलाई लिएर केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा चकिएको विवाद पदाधिकारीहरुले मिलाउने भएका छन् । त्यसका लागि शनिबार केन्द्रीय समितिको बैठक अगावै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीको बैठक बोलाएका...
नोबेलद्वारा जवर्जस्ती भर्ना प्रयास
काठमाडौं, ३१ साउन । पूर्वाधार र अन्य मापदण्ड नपुगेका कारण चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर (एमडीरएमएस) कोटा कटौतीमा परेको विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले जवर्जस्ती भर्ना अभियान सुरु गरेको छ । नोबेलले सार्वजनिक सूचना निकालेर गतवर्षकै कोटा संख्यामा...
बाढी र पहिरोको वितण्डाले ४१ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी बेपत्ता, कुन-कुन जिल्लामा विपत्ति ?
काठमाडौं, ३० साउन । अविरल बर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परी देशका विभिन्न भागमा ४१ जनाको मृत्यु भएको छ । बाढी र पहिरोले सुर्खेतमा मात्रै २१ जनाको ज्यान गएको छ । ४४ जना हराइरहेका...
उज्यालो एफएममा आन्दोलन, १७ जनाले एकैसाथ काम छाडे
काठमाडौं ३० साउन । उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क एफएमका १७ जना पत्रकारले शुक्रबारबाट एकैपटक काम छाडेका छन् । तलब बृद्धिको माग गर्दै दुई महिनादेखि जारी आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै १७ जना पत्रकारहरुले सामूहिक रुपमा उज्यालो...
सरकार परिवर्तन हुँदैन: देउवा
कैलाली, ३० साउन । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले सरकार सञ्चालनमा एमाले र काँग्रेसबीच देखिएको विवाद सामान्य भएको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन कैलालीले धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता देउवाले दुई दलको...
प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आफ्नै सभासदले किन गरे आलोचना ?
काठमाडौं, ३० साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उहाँकै पार्टीका सभासदले तिव्र आलोचना गरेका छन् । शुक्रवारको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा कांग्रेस सभासद रामहरी खतिवडाले प्रधानमन्त्री कोइरालाको आलोचना गर्नुभएको हो...
डीआइजी बढुवाको विरुद्धमा सवर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं, ३० साउन । डीआइजी बढुवाको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । नौ डीआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो । डीआइजी बढुवा पुनरावलोकन समितिको सिफारिसअनुसार बढुवा नगरिएको भन्दै एआइजीका...
प्रवासी नेपालीको उपलब्धि: बाँच्न पाउने भए मृत्युदण्ड सुनाइएका अनिश खालिङ राई
काठमाडौ, ३० साउन। मृत्युदण्डको सजाय पाएका अनिश खालिङ् राईले प्रवासी नेपालीहरुको सहयोगबाट बाँच्न पाउने भएका छन् । अनिश बचाउ अभियान समितिले युएई दुवईको अवुधावीमा मृत्युदण्डको सजाय पाएका अनिश खालिङ् राईलाई बचाउन चाहिने ब्लडमनी रकम...
‘चरी’का आफन्तबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर, खुस्बुका पूर्वप्रेमी पनि मुद्दाका बिपक्षी
काठमाडौं, ३० साउन । प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिएका भनिएका डन दिनेश अधिकारी चरीका आफन्तहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । चरीका दाजु धुव्र अधिकारीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । गत बुधबार...
प्रेम विवाह गरेकी युवतीलाई अलपत्र पारेपछि…
बारा, ३० साउन । प्रेम विवाह गरेर भारतीय युवतीलाई अलपत्रमा पार्ने युवकलार्इ प्रहरीले बिना कारबाही छाडेपछि बाराको कलैयामा महिला अधिकारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी र स्थानीयवासीले प्रदर्शन गरेका छन् । भारतको झारखण्ड राज्यको हजारी वागकी २२ वर्षीया...
« 1 … 6,028 6,029 6,030 6,031 6,032 … 6,276 »